प्याजले १ मिनेटमै नि’को पार्छ दाँतको दु’खाई, जान्नुस् ५ घ’रेलु उ’पाय – Krazy NepaL
May 12, 2021 370
एजेन्सी , राम्ररी दाँत स’फा नगर्दा वा चिसो पानी पिए लगत्तै तातो चिज खाएपछि दाँत दु’ख्ने हुन्छ । दु’खाई स’हन न’सक्दा प्राय हामी चि’कित्सक कहाँ पुगिहाल्छौ, तर घ’रेलु उपायतिर ध्यान दिँदैनौँ । जान्नुहोस्, दाँत दु’ख्दा अ’पनाउन सकिने घ’रेलु उपाय, जसले तत्कालै आ’राम दिन्छ। कागती – कागतीमा भिटामिन सी हुन्छ, जसले दाँतको दु’खाईबाट छु’ट्कारा दि’लाउँन सक्छ ।
दु’खेको भागमा कागती ल’गाउँन तुरुन्तै रा’हत मिल्छ। आलु – यदि दाँतको दु’खाईका साथ–साथै सुन्निने पनि भए आलुलाई ता’छेर त्यसको टुक्रालाई दु’खेको ठाउँमा १५ मिनेट राख्नुहोस्, चाँडै आ’राम म’हशुस गर्नुहुन्छ।
लसुन – लसुनको एक पो’टीलाई नुनसँग खानुहोस्, यसले दाँतको दु’खाईबाट राहत दिन्छ। प्याज – हरेक तीन मिनेटमा प्याँजको एक टु’क्रा खाने गरेमा मुखका कि’टाणु म’र्छन् र यसले दाँतको दु’खाई पनि कम गर्छ। ल्वां’ग – सबैलाई थाहा भएको कुरा, दाँत दु’खेमा ल्वां’गले तुरुन्तै आ’राम दिन्छ । दु’खेको भा’गमा ल्वां’ग वा ल्वां’गको तेल ल’गाउन सक्नुहुन्छ।
काठमाडौँ । बिना मेकअप कसरी सुन्दर देखिने ? कसरी छालालाई मुलायम र चम्किलो बनाउने ? यसका काइदा छन्। यद्यपी केहि सर्त भने पालना गर्नुपर्छ।
१) दिनमा दुई पटक अनुहार धुने
आफ्नो छालाको हेरचाह गरेर मेकअप बिना सुन्दर देखिन सकिन्छ। जति समय कस्मेटिक उत्पादन खरिद गर्न र लगाउन खर्च गरिन्छ, त्यस समय छालाको हेरचाहमा लगाउनुपर्छ। स्तरिय फेसवास प्रयोग गरेर दिनमा दुई पटक राम्ररी अनुहार सफा गरौं । यसले प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गर्छ।
– अनुहार दिनमा दुई पटकभन्दा धेरै धुनु त्यती लाभदायक छैन। किनभने त्यसरी पटक-पटक अनुहार सफा गर्दा छाला रुखो र संवेदनसिल हुन्छ ।
२) मृत छाला निकाल्नुहोस्
गाउँघरमै पाईने यो फूल, हाडजोर्नी र सुगरका लागि हुन्छ अमृत समान
हाडजोर्नीमा यस्तो समस्या त छैन ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
३) अनुहारमा पटक-पटक छोइरहनु हुन्न
धेरैको बानी हुन्छ, हातले अनुहार छोइरहने । यसले छालाको गुणवत्तामा धेरै असर गर्छ । हातको माध्यामबाट अनुहारमा ब्याक्टेरिया फैलन्छ।
४) हरेक रात मोश्चराइजर लगाउने
जब अनुहार धोइन्छ, त्यसपछि फेशियल मोश्चराइजर लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि गुणस्तरिय मोश्चराइजर प्रयोग गरौं । राती प्रयोग गर्नका लागि धेरै पोषक मोश्चराइजर उपयुक्त हुन्छ।
जहिलेपनि आफ्नो छालाको प्रकृति अनुसारमोश्चराइजर छनौट गरौं ।
Prevगर्भवती महिलाले झुक्किएर पनि नखानुस यी चिजहरु,